Ministeran'ny Aterineto - Fiangonan'i Kristy ho an'ny valintenin'ny loza loza
Ny ekipan'ny valinteny ho an'ny loza dia atolotra avy hatrany any amin'ny kôngregasiôna ao an-toerana ao amin'ilay faritra voaangona loza. Ny tanjon'ny Ekipa Response Disaster dia ny hanampy ny kongregasiona eo an-toerana amin'ny famerenana sy fandraisana mpiasa an-tsitrapo hanampy amin'ny filàna ara-pihetseham-po sy ara-panahy ny tra-boina ary hanampy azy ireo amin'ny sehatra fanadiovana sy fanarenana.
Ny ekipan'ny Response Disaster dia hitondra ity manaraka ity any amin'ny tranonkala loza mba hanampiana ny fiangonana eo an-toerana hanatratra ny fiarahamoniny:
Trailer de mobiliser
Fitaovam-piofanana feno tanteraka
Ny ekipan'ny Response Disaster dia mividy ny sakafo atolotra ho an'ny fiarahamonina manontolo ao amin'ny faritra misy loza ary koa fitaovana fananganana trano, fitaovana enti-manampy, fitaovana, fanesorana kesika, sns. Ho an'ireo tsy manana / antoka.
INONA NO MILA MISY FANAMPIANA ANY AN-TANY?
Ireo mpampiofana mpilatsaka an-tsitrapo 1st dia nampidirina hanampy ny fiangonanao hanangana ezaka fanampiana miompana amin'ny fizarana, fananganana sy fanarenana indray
Ny CCNUMX 'Commercial Kitchen Kitchen Unit dia nampidirina hanompo 30-3,000 sakafo / andro ho an'ny fiarahamonina sy mpirotsaka an-tsitrapo
Fampiasana semi-trailer an'ny Semi-trailer 1st sy ny fitaovana maro hafa fitahirizana fitaovana nentina nampiasaina niaraka tamin'ny generatera, seza kambana, lapoaly, hamehana, kodiarana, ary fitaovana rehetra izay ilain 'ireo mpirotsaka an-tsitrapo
Ny RV dia nentina hanampy ireo mpiasa an-tsitrapo
Fampiasana doka ho an'ny fampiasana an-tsitrapo
Databotsan'ny mpiasa an-tsitrapo an'arivony izay nanao sonia ny DRT izay nantsoina hiasa
The Team Response Disaster manampy amin'ny fividianana sakafo sy fananganana fitaovana
836 S. Road School School
Faly izahay manome fampahalalana fanampiny mety ho takatrao. Afaka manatrika ny fiangonanay izahay mba hanohanana ny ezaka fanampiana taloha. Miangavy ny ekipan'ny Response Disaster mba haka ny fampisehoana.
Raha te hahazo fampahalalana misimisy kokoa ianao dia azafady mifandraisa amin'i Steve Liles ao amin'ny 937-689-5725 na Karen Kofahl ao amin'ny 214-734-9647.